6-da ugu Sarreysa ee Calaamadeynta Calaamadaha Cad ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/6-da ugu Sarreysa ee Calaamadeynta Calaamadda Cad ee WordPress
6-da ugu Sarreysa ee Calaamadeynta Calaamadda Cad ee WordPress
Ilaa aad tahay xirfadle mareegaha ah oo si fiican u yaqaan dhabarka WordPress, ma jirto dammaanad inaad ogaan doonto inaad u habayn karto sida shuruudahaaga. Haa, taasi waa sax! Dhaqankan waxaa loo yaqaan calaamad-cadeynta, taas oo asal ahaan ah habka looga saaro dhammaan sheegidda WordPress ee dhabarkaaga oo wax ka beddelo si ay u muujiso calaamadayntaada gaarka ah.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad si buuxda u shakhsiyayn kartaa dhabarka dambe (sida menu-ka maamulka, dashboardka, foomka gelitaanka, iyo wixii la mid ah) ee degelkaaga WordPress oo aad ka dhigto mid aad u faraxsan in la eego oo aad isticmaasho adiga iyo kooxdaada.
Haddii aad u soo dirtay horumarinta degelkaaga hay'ad calaamadeynaysa, waa mas'uuliyadooda inay xaqiijiyaan gaarsiinta goob gaar ah oo ku habboon shuruudahaaga ganacsi.
Habka calaamadaynta caddaanka sidoo kale waxaa ka mid ah kor u qaadista UI ee goobta, taas oo macnaheedu yahay inaad leedahay dabacsanaan si aad u sameyso isbeddel shaqeynaya sida aagga maamulkaagu u shaqeeyo.
Sida loogu daro Calaamadaynta Cadaanka ah ee WordPress
Ma ogtahay inay jiraan 57,820+ (iyo tirinta) plugins oo ku jira hagaha WordPress? Plugins WordPress waxay kor u qaadaan shaqaynta mareegahaaga iyagoo ku daraya astaamo iyo awoodo cusub oo aan la imaan xirmada.
Xirmooyinkaan waxaa loogu talagalay inay kor u qaadaan waxqabadka boggaaga - laga bilaabo maamulka goobta iyo falanqaynta ilaa qalabka qorista iyo tabaha SEO. Markay sidoo kale timaaddo plugins-calaamadaha cad, WordPress wuu ku kharribi karaa isagoo bixinaya doorashooyin badan.
Si aan geeddi-socodkaaga go'aan-qaadashada uga dhigno mid kuu fudud, aan sahaminno lix summada-calaamad-cad-cad-cajiib ah oo kaa caawin kara inaad boggaga WordPress ku siiso isbeddel:
Haddii aad raadinayso inaad shakhsiyayso foomkaaga galitaanka adigoon wax kood ah samayn, Branda ayaa adiga kugu habboon. Xitaa haddii aad rabto inaad dib u habeyn ku sameyso bogga galitaanka WordPress, Branda waxay kaa caawineysaa inaad habeyso dhinac kasta oo boggaaga ah si aad u muujiso astaantaada.
Waxay awood kuu siinaysaa inaad geliso muuqaal asal ah, hagaajiso mugdigiisa, kor u qaado magaca isticmaalaha iyo meelaha sirta ah oo aad abuurto nidaamyo midab leh. Waxa kale oo aad bedeli kartaa habka dayactirka, ku dar "soo dhawoow" boggaga degitaanka oo habeyn kartaa midabka iyo goobaha hooska.
Branda waa plugin bilaash ah, kaas oo kaa caawinaya inaad wakhti badbaadiso oo aad yarayso arrimaha ku habboon plugin. Sidoo kale waa ammaan in la isticmaalo, taasoo kuu oggolaanaysa inaad tijaabiso doorashooyin ammaan oo kala duwan sida aad jeceshahay. Branda waxay ku fiican tahay dhammaan noocyada ganacsiyada - kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar, hal-abuur ama xirfadle.
2. Summada Cad CMS
Pluginkani waxa uu hiigsanayaa in uu dhabarka WordPress ka dhigo mid aan jahawareer lahayn adiga oo shakhsiyeynaya dashboard-ka, shaadhka soo galitaanka, iyo liiska maamulka oo dhamaystiran. Waxay caan ku tahay shirkadaha horumarinta webka u dhisa macaamiishooda mareegaha.
Waxaa jira dhawr waxyaalood oo aad ku samayn karto summada cad CMS plugin. Bilawga, waxaad habayn kartaa bogga galitaanka, ku dari kartaa astaantaada shirkadda iyo sawirka asalka, oo waxaad ku samayn kartaa isbeddel CSS haddii aad rabto.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa quudinta RSS-kaaga guddiga dashboard-ka si aad ula socoto wararka warshadaha iyo isbeddellada suuqa. Xakamee sida liiska maamulahaagu kuugu muuqdaan adiga iyo kooxdaada hab fudud.
Waxa ka sii muhiimsan, haddii aad qorshaynayso inaad ka soo saarto goob xoqan, sixiriyaha plugin's feature wuxuu ku darayaa sumadeyntaada oo wuxuu hayaa oo diyaar u yahay inuu ku noolaado daqiiqado gudahood. Calaamadda Cad ee CMS plugin waxay yaraynaysaa madax xanuunkaaga iyadoo kuu oggolaanaysa inaad si hufan u xalliso aasaaskaaga.
Badanaa loo tixgeliyo summada caddaanka ah ee ugu horumarsan plugin WordPress ee suuqa, waxay bixisaa shaqooyin kala duwan oo aan ka ahayn widgets, mawduucyada, iyo qaababka menu. Qalabka, waxaad ku xakameyn kartaa dhammaan habeynta boggaaga WordPress.
Isticmaalka walxaha, waxaad shakhsiyayn kartaa liiska maamulka (ay ku jiraan dhammaan qaababka CSS iyo isku xidhka) oo waxaad ku dari kartaa favicon iyo calaamad gaar ah. Waxay ku siinaysaa 20+ widgets dashboard-ka loogu talagalay falanqaynta goobta iyo 100 mawduuc oo soo jiidasho leh oo gudaha ah, oo ay ku dhammaystiran yihiin midabyo badan, midab madow iyo midab khafiif ah.
Plugin-ku wuxuu daboolayaa dhammaan saldhigyada wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad muujiso ama qariso URL-yada isku xirka sida "Lagu illowdey Password" iyo "Back-to-site." Is-dhexgalkeeda-jiid-jiid waxay kaa caawinayaan in aad dib u habayso oo aad dib u habaynayso menu-hoosaadyada oo aad beddesho astaanta liiska adiga oo aan dhib lahayn.
Qalabku wuxuu ka dhigayaa goobtaada mid ku habboon shabakadaha shabakadaha badan. Intaa waxaa dheer, maamulkeedu wuxuu ku shaqeyn karaa qaababka RTL iyo LTR labadaba si loogu isticmaalo luqad kasta.
Kadib waxaa jira xulashooyin badan oo kala duwan oo qoraal ah oo aad isticmaali karto, oo ay ku jiraan 650+ isku dhafan Google Fonts iyo hagaajin fudud oo cabbirka farta iyo dhererka khadka iyo wixii la mid ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka saari kartaa xiriiriyeyaasha aan loo baahnayn ee dhabarka adigoo isticmaalaya IDs nood oo aad ku tiirsanaato dukumeenti faahfaahsan oo ay bixiso plugingan firfircoon oo badan.
4. Summada Cad
Kani waa plugin fudud oo leh hal yool oo keliya - si aad u fududayso magaca WordPress-kaaga. Adigoo isticmaalaya Summada Cad, waxaad shakhsiyaynaysaa shaashadda soo galitaanka boggaaga oo wata astaanta shirkadda iyo sawirka asalka ah ee habboon.
Waxa kale oo aad samayn kartaa dashboard gaar ah, oo ku shaqeeya widgets khuseeya, kaas oo wanaajinaya guud ahaan waayo-aragnimada isticmaale sidoo kale adiga iyo kooxdaada ku siinaya inaad hesho FAQs, casharro, iyo tilmaamo isla saxan dashboard-ka.
Waxa kale oo jira nooc horumarsan oo plugin ah oo la yidhaahdo White Label Pro. Si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa waxqabadyo badan oo leh nooca bilaashka ah sidoo kale, oo ay ku jiraan xulashada qaababka bogga galitaanka, habeynta CSS, ku darista shaqeynta wada sheekaysiga tooska ah aagga maamulka, iyo qarinta astaanta maamulka, haddii loo baahdo.
Ka sokow, waxaad bedeli kartaa credit footer maamulka oo aad dooran kartaa maamulayaasha summada cad oo badan si aad u dhaafto sharciyada oo aad ugu raaxaysato dabacsanaan badan xagga dambe.
Plugin-ka WordPress wuxuu siiya macaamiishaada dashboard maamuleed oo cusub, oo ay ku dhammaystiran yihiin summadahaaga. Si degdeg ah oo fudud ayay u rakiban tahay, waxayna leedahay is-dhexgal isticmaale fudud oo sahlan in la dhex maro. Marka la geeyo, waxaad WPShapere ku helaysaa cusboonaysiin nololeed oo bilaash ah.
Waxaad dabooli kartaa hawlqabadyo badan oo aasaasi ah, sida soo dejinta astaanta gaarka ah ee boggaga gal iyo dashboard-ka, ku ciyaarista xulashooyin midab aan xadidnayn, maaraynta aaladaha dashboard-ka caadiga ah, iyo curyaaminta cusboonaysiinta asalka tooska ah si loo xakameeyo dheeraad ah.
Adigoo isticmaalaya plugin-ka, waxa kale oo aad awood u siin kartaa isticmaalka mudnaanta. Macnaha, waxaad qarin kartaa shayada menu-ka iyo widgets-ka isticmaalayaasha leh xuquuqaha gelitaanka aasaasiga ah. WPShapere waxa kale oo ay la jaanqaadi kartaa fiilooyinka kale ee caanka ah sida Foomka Xiriirka 7, W3 Total Cache, Jetpack, BBPress, iyo wixii la mid ah, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar ku habboon ganacsiyada horeyba u isticmaalaya plugins kale.
Waxay bixisaa taageero shabakad badan, taas oo macnaheedu yahay inaad shakhsiyayso dhammaan mawduucyada dhabarka ee shabakadda sida maamule sare oo u oggolow mid kasta oo ka mid ah maamulayaasha shabakadaada inay u habeeyaan mawduucyada maamulka sida ay rabaan.
WPShapere waxay la socotaa dukumeenti faahfaahsan oo dhowaan la soo bandhigay ku habboonaanta RTL ee astaamaha isku dhafka ah.
6. Absolutely Admin Custom
Sidoo kale loo yaqaan AG Custom Admin, plugin-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad habayso bogga galitaanka, bar maamulka iyo liiska, dashboardka, iyo wixii la mid ah. Tusaale ahaan, waxaad qarin kartaa shayada maamulka oo waxaad ku summeyn kartaa midabadaada, adigoo ka saaraya wax kasta oo WordPress ah.
Waa suurtagal in lagu daro shayga maamulka gaarka ah oo meesha laga saaro kuwa hadda jira ee muujinaya raadadka WordPress. Mar labaad, waxaa lagu beddeli karaa midabada shirkaddaada.
AG Custom Admin waxa uu bixiyaa qalab loo yaqaan Colorizer kaas oo la mid ah guddiga, taas oo kuu ogolaanaysa inaad bedesho midabka guddiga maamulka WordPress ee caadiga ah, asalka, iyo noocyada xarfaha.
Plugin-ku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hagaajiso UX-gaaga dambe adigoo isticmaalaya widgets dashboards, ka saara xiriiriyeyaasha aan khusayn, badhamada, iyo menu-yada, xidhidhiyaha hoos-u-dhacyada menu-hoosaadka maamulka, iyo ka faa'iidaysiga xulashada Caawinta iyo Shaashada.
Shaki kuma jiro in calaamadaynta cad ee boggaaga WordPress ay tahay hab fiican oo lagu hubinayo labadaba dhabarka dambe iyo kan hore inay bixiyaan khibrad midaysan kooxdaada. Iyada oo ku xidhan plugins-yada aad ugu dambeyntii u dooratay ganacsigaaga, u hubso inaad wali si buuxda u yeelan doonto koontaroolka menu-ka dambe iyo dashboard-ka oo aad awoodo inaad shakhsiyayso shaashadda soo gelida si kasta oo aad jeceshahay.
Haddaba, maxaad sugaysaa? Ku dar taabasho boorash ah iyo xirfad-yaqaannimo dhabarkaaga WordPress oo ku raaxayso khibrad adeegsade aan fiicneyn.
Sida Lacag Looga Sameeyo Youtube-ka: 7 xeeladood oo wax ku ool ah
Sida loo hubiyo MD5 checksum ee Android